Dhegeyso-Hogaamiye sare oo ka tirsanaa Alshabaab oo ka waramay dhibaatada ay shacabka ku hayaan | Puntland
Dhegeyso-Hogaamiye sare oo ka tirsanaa Alshabaab oo ka waramay dhibaatada ay shacabka ku hayaan
Hogaamiye sare oo katirsanaa Al Shabaab ayaa shaaciyay in uu isaga baxay kooxdaasi uu in mudo ah katirsanaa xilal kala duwana kasoo qabtay.
Macalin Geedoow Aadan Abuukar oo sheegay in uu ahaa Gudoomiyihii Al Shabaab ee gobolka Baay iyo sidoo kale ahaa taliyihii ciidanka Al Shabaab ee gobolkaasi ayaa caawa cadeeyay in gabi ahaan uu ka baxay kooxda Al Shabaab.
Waxa uu sheegay Macalin Geedow in isaga iyo sargaal kale oo ay kawada tirsanaayeen Al Shabaab go’aansadeen in ay ka baxaan kooxdaasi, waxa uuna xusay in kooxda ay hareer martay wadadii saxda aheyd ayna wado baabi’inta dadka sida uu tilmaamay.
Macalin Geedow ayaa sheegay in ay wataan ciidan badan iskana difaaci karaan Al Shabaab, waxa uuna sheegay in diyaar u yihiin in ay la dagaalamaan Al Shabaab, waxa uuna ka codsaday dowlada in ay garab ka siiyaan dagaalka Al Shabaab uga soo horjeedaan.
Halkaan Ka Dhegeyso.